घिरिङ गाउँपालिकाका हजार घरमा बत्ती बाल्ने तयारी - नेपालबहस
घिरिङ गाउँपालिकाका हजार घरमा बत्ती बाल्ने तयारी
| १३:२३:५५ मा प्रकाशित
२६ भदौ, दमौली । तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाको करिब एक हजार घरमा बत्ती बाल्ने तयारी गरिएको छ । विद्युतको सुविधा नपुगेका घिरिङका गाउँमा विद्युतीकरण गर्ने तयारीसहित काम अगाडि बढाइएको छ ।
गाउँपालिका–१ को पुट्टार, अत्रौली, वैडी, भन्टार, कटहरे, हात्तीडाँडा, घिरिङ गाउँपालिका–२ को गजरकोट, काठेकोट, घिरिङ गाउँपालिका–४ को जिताकोट, गड्यौलीटारको करिब एक हजार घरमा विद्युतीकरण बाँकी रहेको घिरिङ विद्युतीकरण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष होमबहादुर थापाले जानकारी दिए।
विद्युतीकरण अन्तर्गत कतै खम्बा गाडिएको र कतै तार विस्तारको काम भइरहेको छ । “दशैं अगाडि नै बत्ती बाल्न सकिन्छ कि भनेर काम तीव्र पारेका छौ”, उनले भने । गाउँपालिकाको रु ६१ लाखको बजेटबाट सो काम भइरहेको छ ।
गाउँपालिका–४ नयाँटार, गड्यौलीटार, जिताकोट, भाटडाँडा, लोहडाँडा, गलकोटमा मिटर बक्स ल्याउने तयारी गरिएको छ । अत्रौली, कटहरे, भन्टारमा पनि विद्युतीकरणको काम भइरहेको छ ।गाउँपालिकाका अध्यक्ष रनबहादुर रानाले ‘उज्ज्यालो घिरिङ’ अभियान सम्पन्न हुने क्रममा रहेको बताए ।
जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित भएर आएपछि करिब एक हजार ४०० भन्दा बढी घरमा बत्ती बालिसकिएको उाले जानकारी दिए। विद्युतीकरणका लागि गत वर्ष रु एक करोड विनियोजन गरिएको थियो भने यो वर्ष कोभिड–१९ का कारण रु १५ लाख विनियोजन गरिएको छ । “तर विद्युतीकरणका लागि पैसा अपुग भयो भने भइपरी खर्चबाट भए पनि मिलाउँछौ,” उनले भने । सो कार्यमा तनहुँ जलविद्युत् आयोजना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहयोग गरेको छ ।
बत्ती बल्न बाँकी घरमा असोज कात्तिकभित्रै बत्ती बल्ने बताइएको छ । “आवश्यक ट्रान्सफर्मर ल्याइसकेका छौ, खम्बा गाड्ने, तार तान्नेलगायतका काम चलिरहेको छ”, उनले भने ।उक्त गाउँपालिका–२ माहोरकोटमा पहिलो पटक बत्ती बलेको छ । उक्त ठाउँका ५९ घरमा बत्ती बलेको गाउँपालिकाका सल्लाहकार सुमनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । पुट्टार र बैदीका केही भागमासमेत विद्युतीकरण सम्पन्न भएको छ ।
पुट्टारका तारा खनालले धेरै वर्षको प्रतिक्षापछि बल्ल बिजुली बलेको बताए । पुट्टारमा दुई चरणमा गरेर घर घरमा बिजुली पुगेको छ । साविक गजरकोट वडा नं ४ मा पाँच महिना अगाडि र अर्को ठाउँमा १५–२० दिन अगाडि बत्ती बलेको छ । “बिजुलीको सुविधा नहुँदा सोलारको प्रयोग गर्दै आएका थियौं, अब त बिजुली नै बाल्न थालिसकेको छौ्,” खनालले भने ।
पर्यटन साझेदारीका लागि ७१३ आयोजनाको प्रस्ताव १ दिन पहिले
वडाध्यक्षको निधन भएपछि गाउँपालिकामा बिदा २ हप्ता पहिले
शुक्रबारदेखि सवारीसाधनको ढोकामा अनिवार्य स्यानिटाइजर २ हप्ता पहिले
सप्तरी–सिरहाका गाउँ जोड्न झोलुङ्गे पुल बन्ने २ हप्ता पहिले
भारतबाट अतिक्रमित भूमिमा बसेका नेपालीलाई नागरिकता दिइने २ हप्ता पहिले
सेनाले खोल्यो कालापानी जाने घोरेटो बाटोको ट्र्याक ३२ मिनेट पहिले
सेनाले ग¥यो कङ्गो घटनाबारे छानबिन शुरु ३९ मिनेट पहिले
सशस्त्र प्रहरी बाह्रैमास कालापानी नजिक छांगरुमा बस्ने ४१ मिनेट पहिले
बागलुङमा ७ हजार ८ सयले गरे कोरोना बीमा ४५ मिनेट पहिले
दम्पतीमाथि आक्रमण हुँदा श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमानकाे अवस्था गम्भीर ५२ मिनेट पहिले
मनसुन शुरु भएयता गण्डकीमा १२६ जनाको मृत्यु १ घण्टा पहिले
मोदी र सुगाबीच टेलिफोन वार्ता, सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने विषयमा कुराकानी ४ घण्टा पहिले
कोरोनाबाट विश्वभर ९ लाख ९३ हजार भन्दा बढीको मृत्यु ५ घण्टा पहिले
विहारमा विधान सभा सदस्यको निर्वाचन तीन चरणमा हुने ५ घण्टा पहिले
भारतमा नौ लाख ६० हजार जना अझै पनि संक्रमित अवस्थामै ५ घण्टा पहिले
आज काठमाडौं उपत्यकामा थप ७२४ जनालाई कोरोना ५ घण्टा पहिले
आज कोरोनाबाट थप ८ जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या ४६७ पुग्यो ५ घण्टा पहिले
प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक शाहलाई कोरोना पुष्टि ५ घण्टा पहिले
आज थप १ हजार २०७ जनामा कोरोना पुष्टि ५ घण्टा पहिले
ओली सरकारको अर्काे राष्ट्रघात:- निगम मारेर यति पास्ने नीति ९ घण्टा पहिले
जुत्ता पोलिस गर्नेको कमाई महिनाकै १८ लाख ! ९ घण्टा पहिले
ठट्टा हैन हाम्रो राष्ट्रवाद ! ८ घण्टा पहिले
चितवनमा हेटौँडाका कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु ८ घण्टा पहिले
धरानमा उपचाररत संक्रमित पुरुषको मृत्यु ११ घण्टा पहिले
कोरोना महामारीमै सवा तीन अर्ब राजश्व सङ्कलन ८ घण्टा पहिले
पहिराेमा बेपत्ता पाँचै जनाको शव भेटियो १३ घण्टा पहिले
टोलमै पुगेर विद्यार्थी पढाउँदै सामुदायिक विद्यालय १४ घण्टा पहिले